ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့များတွင်တွေ့ရှိထား -
[ February 23, 2020 ] တိုက်ဆိုင်လို ့မခံႏိုင်ရင် ဘလော့သွားပါ	KNOWLEDGE
[ February 23, 2020 ] တောင်ကိုရီယား မှာ ဝူဟန် အသေမြန်ရောဂါ စိုးရိမ်ရလို့နိုင်ငံကို အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်	NEWS
[ February 23, 2020 ] ငါးဖမ်းစက်လှေပေါ်မှာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ရေလုပ်သားနှစ်ဦး ရုတ်တရက်လဲကျသေဆုံး	NEWS
[ February 23, 2020 ] တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (23-2-2020 to 29-2-2020)	KNOWLEDGE
[ February 23, 2020 ] သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင် သီတဂူဆရာတော်၏ပုံတူကြေးရုပ်တု ထားရှိပူဇော်	NEWS
[ February 23, 2020 ] လေးတန်းကျောင်းသူလေးအား ပထွေးဖြစ်သူမှ မဖွယ်မရာပြုကျင့် ကြံစည်	NEWS
[ February 23, 2020 ] မှတ်ပုံမတင်တဲ့ SIM Card တွေ ဇွန်လကုန် အပြီးပိတ်သိမ်းမည်	NEWS
[ February 23, 2020 ] ညည နှစ်ထောင်ပေးမယ် ငါးထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ခြေတော်တင်ဖို့ကြိုးစားကြသူတွေဝိုင်းနေတဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ် ကလေး အမေ	NEWS
[ February 23, 2020 ] ကလေးနှစ်ဦးကို ပေါင်(၂၄၀၀၀)နဲ့ ရောင်းချဖို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့မိခင်	NEWS
[ February 23, 2020 ] သင်ဘယ်နေ့မှာမွေးတာလည်း နေ့နံအလိုက်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ	KNOWLEDGE
HomeNEWSကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့များတွင်တွေ့ရှိထား
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့များတွင်တွေ့ရှိထား
February 13, 2020 Alinn Pya NEWS 0
တကမ္ဘာလုံး တခြားဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့ဖူးသေးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ်ကို မြန်မာနိုင်ငံက ဂူအောင်းလင်းနို့တွေဆီမှာ တွေ့ထားတယ်လို့ စမစ်ဆိုးနီးယန်း သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ဇီဝဗေဒဌာန ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကု ဆရာဝန် မာ့ခ်ဗာလစ်တီတိုကို ကိုးကားပြီး ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှာ ရေးပါတယ်။
ဗာလစ်တီတိုဟာ တိရစ္ဆာန်ကနေ လူကို ကူးစက်နိုင်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို အထူးပြု လေ့လာခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ လင်းနို့တွေဆီက သွားရေနဲ့ မစင်နမူနာတွေကိုတင် စစ်တမ်းကောက်ခဲ့တာ မဟုတ်ဘဲ ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်နိုင်လောက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို နားလည်ဖို့ ဒေသတွင်း လူတွေရဲ့ အပြုအမူတွေကိုပါ လေ့လာခဲ့တာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဂူတွေအများအပြားဟာ ဘာသာရေးအရ မြင့်မြတ်တဲ့ နေရာတွေအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး လူတွေက ဂူထဲ ဖိနပ်တွေ ခြေအိတ်တွေ ချွတ်ပြီးဝင်ရတဲ့ဓလေ့ထုံးစံကြောင့် ခြေထောက်ကနေ ကူးစက်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တချို့ ဒေသခံတွေကလည်း တောကောင်သား ဈေးကွက်ထဲမှာ လင်းနို့တွေကို စားတာရောင်းတာ ရှိနေတယ်လို့ ဗာလစ်တီတိုက ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပျားလင်းနို့လို့ခေါ်တဲ့ ဟမ်ဘယ်ဘီး လင်းနို့မျိုးစိတ်ထဲက လင်းနို့ကောင်ရေ တထောင်ကျော်ကနေ နမူနာ တသောင်းကျော် ကောက်ယူစုဆောင်း စမ်းသပ်ထားခဲ့တယ်။
စမ်းသပ်ချက်အရ ကမ္ဘာပေါ် ဘယ်နေရာမှာမှ မတွေ့သေးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရှိနေတယ်လို့ စစ်တမ်းက ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ်သစ်ဟာ လူသားတွေအတွက် ဆိုးရွားတဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိမယ်မထင်ဘူးလို့ စမစ်ဆိုးနီးယန်းတက္ကသိုလ် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အစီအစဉ်ရဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဆူဇန်မာရေးက ပြောပါတယ်။
အနာဂတ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိသေးပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ ကျမတို့မှာ သတင်းအချက်အလက် ရှိထားပြီးပြီလို့ သူက ပြောပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ အသစ်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ ကူးစက်ရောဂါတွေရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုကို လေ့လာတဲ့ အမေရိကန် အေဂျင်စီ PREDICT ဟာ နိုင်ငံပေါင်း ၃၀ကျော်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်း ငါးခု ပူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အေဂျင်စီပါ။
စမစ်ဆိုးနီးယန်း တက္ကသိုလ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပရောဂျက်ဟာ ဒီအေဂျင်စီက လုပ်နေတဲ့ အားထုတ်မှု အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်က စတင်ခဲ့တဲ့ ပရောဂျက် ဟာ ၂၀၁၉ စက်တင်ဘာမှာ အဆုံးသတ်ခဲ့တာပါ။ ပရစ်ဒစ် အဖွဲ့ဝင် အသင်းတွေဟာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်အတွင်း ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် အမျိုးအစားပေါင်း ၁၆၀ အပါအဝင် နို့တိုက်သတ္တဝါတွေကို ကူးစက်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်သစ် ၁၂၀၀ကျော်ကို ရှာတွေ့ခဲ့တယ်လို့လည်း မာရေးက ပြောပါတယ်။
စမစ်ဆိုးနီးယန်းက သားရိုင်းတိရစ္ဆာန်ရေးရာ ပညာရှင်တွေဟာ တိရစ္ဆာန်ရုံတွေကနေ လူကို ရောဂါကူးစက်မှု လျှော့ချရေး အလားအလာတွေကို ကမ္ဘာတဝန်းမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ ဝါရှင်တန်ပို့စ် သတင်းစာက ရေးပါတယ်။
Credit to DVB TV News
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံက ဂူေအာင္းလင္းနို႔မ်ားတြင္ေတြ႕ရွိထား
တကမၻာလုံး တျခားဘယ္ေနရာမွာမွ မေတြ႕ဖူးေသးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္သစ္ကို ျမန္မာနိုင္ငံက ဂူေအာင္းလင္းနို႔ေတြဆီမွာ ေတြ႕ထားတယ္လို႔ စမစ္ဆိုးနီးယန္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး ဇီဝေဗဒဌာန ကမၻာ့က်န္းမာေရး အစီအစဥ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ကု ဆရာဝန္ မာ့ခ္ဗာလစ္တီတိုကို ကိုးကားၿပီး ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉ ရက္မွာ ေရးပါတယ္။
ဗာလစ္တီတိုဟာ တိရစၧာန္ကေန လူကို ကူးစက္နိုင္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကို အထူးျပဳ ေလ့လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ လင္းနို႔ေတြဆီက သြားေရနဲ႔ မစင္နမူနာေတြကိုတင္ စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘဲ ဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္နိုင္ေလာက္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို နားလည္ဖို႔ ေဒသတြင္း လူေတြရဲ့ အျပဳအမူေတြကိုပါ ေလ့လာခဲ့တာပါ။
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ဂူေတြအမ်ားအျပားဟာ ဘာသာေရးအရ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ေနရာေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံထားရၿပီး လူေတြက ဂူထဲ ဖိနပ္ေတြ ေျခအိတ္ေတြ ခၽြတ္ၿပီးဝင္ရတဲ့ဓေလ့ထုံးစံေၾကာင့္ ေျခေထာက္ကေန ကူးစက္နိုင္ေျခရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ ေဒသခံေတြကလည္း ေတာေကာင္သား ေဈးကြက္ထဲမွာ လင္းနို႔ေတြကို စားတာေရာင္းတာ ရွိေနတယ္လို႔ ဗာလစ္တီတိုက ေျပာပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ပ်ားလင္းနို႔လို႔ေခၚတဲ့ ဟမ္ဘယ္ဘီး လင္းနို႔မ်ိဳးစိတ္ထဲက လင္းနို႔ေကာင္ေရ တေထာင္ေက်ာ္ကေန နမူနာ တေသာင္းေက်ာ္ ေကာက္ယူစုေဆာင္း စမ္းသပ္ထားခဲ့တယ္။
စမ္းသပ္ခ်က္အရ ကမၻာေပၚ ဘယ္ေနရာမွာမွ မေတြ႕ေသးတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ရွိေနတယ္လို႔ စစ္တမ္းက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္သစ္ဟာ လူသားေတြအတြက္ ဆိုးရြားတဲ့ က်န္းမာေရး ျပႆနာေတြကို ျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိမယ္မထင္ဘူးလို႔ စမစ္ဆိုးနီးယန္းတကၠသိုလ္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရး အစီအစဥ္ရဲ့ ညႊန္ၾကားေရးမႉး ဆူဇန္မာေရးက ေျပာပါတယ္။
အနာဂတ္မွာ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာ မသိေသးေပမယ့္ အနည္းဆုံးေတာ့ က်မတို႔မွာ သတင္းအခ်က္အလက္ ရွိထားၿပီးၿပီလို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ နိုင္ငံတကာမွာ အသစ္ထြက္ေပၚလာတဲ့ ကူးစက္ေရာဂါေတြရဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို ေလ့လာတဲ့ အေမရိကန္ ေအဂ်င္စီ PREDICT ဟာ နိုင္ငံေပါင္း ၃၀ေက်ာ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ငါးခု ပူးေပါင္း ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ေအဂ်င္စီပါ။
စမစ္ဆိုးနီးယန္း တကၠသိုလ္ရဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ပေရာဂ်က္ဟာ ဒီေအဂ်င္စီက လုပ္ေနတဲ့ အားထုတ္မႈ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္က စတင္ခဲ့တဲ့ ပေရာဂ်က္ ဟာ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာမွာ အဆုံးသတ္ခဲ့တာပါ။ ပရစ္ဒစ္ အဖြဲ႕ဝင္ အသင္းေတြဟာ က်န္ခဲ့တဲ့ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ကိုရိုနာ ဗိုင္းရပ္စ္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၁၆၀ အပါအဝင္ နို႔တိုက္သတၱဝါေတြကို ကူးစက္တဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္သစ္ ၁၂၀၀ေက်ာ္ကို ရွာေတြ႕ခဲ့တယ္လို႔လည္း မာေရးက ေျပာပါတယ္။
စမစ္ဆိုးနီးယန္းက သားရိုင္းတိရစၧာန္ေရးရာ ပညာရွင္ေတြဟာ တိရစၧာန္႐ုံေတြကေန လူကို ေရာဂါကူးစက္မႈ ေလၽွာ့ခ်ေရး အလားအလာေတြကို ကမၻာတဝန္းမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာက ေရးပါတယ္။
အမည်ပြောင်း၊ မွေးသက္ကရာဇ််​ပြောင်း၊ ဖခင်​အမည်ပြောင်း၊ ကျောင်​း​ပြောင်​း လက်​မှတ်​​ ပျောက်​ဆုံးခြင််းတို့ အတွက်် ဘာတွေ လိုအပ်သလဲဲ?
သားသမီးကို ချစ်တဲ့ မိဘများ အလိုမလိုက်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်များကို အလိုမလိုက်မိကြစေရန် အဖြစ်မှန်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်
တောင်ကိုရီယား မှာ ဝူဟန် အသေမြန်ရောဂါ စိုးရိမ်ရလို့နိုင်ငံကို အရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်
ငါးဖမ်းစက်လှေပေါ်မှာ မြန်မာနဲ့ ထိုင်း ရေလုပ်သားနှစ်ဦး ရုတ်တရက်လဲကျသေဆုံး
တစ်ပတ်စာ ခုနှစ်ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောကိန်း (23-2-2020 to 29-2-2020)
သီတဂူ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်တွင် သီတဂူဆရာတော်၏ပုံတူကြေးရုပ်တု ထားရှိပူဇော်
မယားရှိ… ယောက်ကျင်္ားတွေလင်ရှိတဲ့ …မယားတွေအသေချာ ဖတ်ကြည့်သွားကြပါ။ လင်ရှိတဲ့ မယားတွေမယားရှိတဲ့ဖွန်ရူးတွေ သေချာဖတ်ပါဒူးနဲ့မျက်ရည်သုတ်ရတဲ့ဘဝမရောက်ခင်ပြင်သင့်တာကိုပြင်ပါ သက္ခာ အကြောက်တရား မရှိရင်ဆက်လုပ်ချင်ရာလုပ်ကြပါသူတော်စဉ်ယောင်ယောင် လူကြီးလူကောင်ယောင်ယောင်နဲ့ကြောင် သူတော်ကြွက် သခိုးမလုပ်ကြပါနဲ့ Online သုံးပြီး အရွံဆုံးကလင်ရှာမယားရှာလင်ရူးဖွန်ရူး တွေပဲအိမ်ကညီမ အမ နဲ့ဇနီမယားကို လူများတွေကြည့်မှာကိုကြောက််တဲ့လူသဝန်တိုတတ်တဲ့လူလူများသားမယားကိုကြတော့ဘာလို့အချောင်နှိက်ချင်နေကြတာလဲ …? တိုက်ဆိုင်လို့ စိတ်ဆိုးရင် တစ်ခါတည်းBlock သွားပါ အမှန်တရားက အမှန်တရားပါပဲ “အိမ်ထောင်ရှင်နှင့်” On Line ” အန္တရာယ်” ခေတ် ကာလ ပြောင်းလာသည်နှင့်အမျှ(ပြစ်မူ့)ကျူ […]
Breaking news on 23-02-2020 ဝူဟန် ကိုဗစ် Covid-19 ရောဂgကပ်ဆိုး[ဟာ တောင်ကိုရီယား နိုင်ငံမှာ စိုးရိမ်ဖွယ် နှစ်ဆမြင့်တက်လာတာကြောင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ Moon Jae-in ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံကိုအရေးပေါ်အခြေအနေ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ရောဂါကူးဆက်နေတာတွေ ့ရှိသူ ၆၀၂ ဦး မှာ ၅ဦးသေဆုံးကာ သွေးစစ်အဖြေစောင့်နေသူ ၈၀၅၇ ဦးကို ရောဂါ စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ ရှင်ကျန်ဂျီ ခရိယာန် အသင်းတော် ဘာသာရေး ဝတ်ပြုနေရာ Shincheonji Church […]
ဒီကနေ့နံနက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ပကျော့ ခီရီခံ ပင်လယ်ပြင်မှာ ထိုင်းနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား ငါးဖမ်းလှေလုပ်သား ၃၆ ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ လှေနံမည် ပလာထိုထောင်း Pla Thu Thong စက်လှေ ဟာ Pran Bur မြို့နယ် ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးဖမ်းပိုက်ချနေရင်း ထိုင်းနိုင်ငံသား Nopparat Saisi နော့ပရစိုင်စင် (၂၇) နှစ် နဲ့ ချစ်သူစိုး(၂၂)နှစ် တို့နှစ်ဦးဟာ ရုတ်တရက် လှေကြမ်းပြင်ပေါ် လဲကျ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း […]
တနင်္ဂနွေသားသမီး အ​ပြောင်​းအလဲ​ ကောင်​း​တွေကြုံရပါလိမ်​့မည်​ မိမိရဲ့ယုံကြည်​စွာ နားလည်​​ပေးမူအ​ပေါ် အခွင်​့အ​ကောင်​းယူ လိမ်​ညာတာမျိူ းခံရတတ်​ပါသည်​ ထူးထူးခြားခြား အိပ်​မက်​​တွေမြင်​မက်​ပါလိမ်​့မည်​ ထီ​ပေါက်​ခြင်​း ဆုမဲများ​ပေါက်​ခြင်​းကြုံရပါမည်​ အနက်​​ရောင်​အသုံးအ​ဆောင်​​တွေ​ရှောင်​ပါ ကျန်​းမာ​ရေးတွင်​ အဆစ်​အမြစ်​များနာ​နေလိမ်​့မည်​ ငယ်​ရွယ်​သူများ အချစ်​​ရေးတွင်​ သင်​တန်​းတက်​ရင်​း ဖူးစာဘက်​​တွေ့ပါမည်​ ထီ17ပါ​သောထီထိုးပါ ယတြာ နာမကျန်​းသူများအား​ဆေးဝါးလှူ ဒါန်​း​ပေးပါ တနင်္လာသားသမီး မိမိရဲ့စိတ်​ဆန္ဒ အ​လောကြီးတာ​တွေ​လျှော့ပါ အရာရာကိုသတိဦး​ဆောင်​ပြီး လုပ်​ကိုင်​ပါ ​ရှေ့တစ်​မျိူ း​နောက်​ကွယ်​တစ်​မျိူးလုပ်​​ဆောင်​တတ်​သူ​တွေကြား​ ချောက်​ချခံရတတ်​ပါသည်​ မိမိအလုပ်​ရဲ့ လျှိူ […]
သီတဂူဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ ပုံတူကြေးရုပ်တုကို စစ်ကိုင်းမြို့ သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်းမှာ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် မနက်ပိုင်းက ထားရှိ ပူဇော်ထားတယ်လို့ သီတဂူမြန်မာမှုအဖွဲ့မှ သိရပါတယ်။ သီတဂူဆရာတော်ကြီး ပုံတူ ကြေးရုပ်တုကို သီတဂူမြန်မာမှုအဖွဲ့ကသီတဂူ ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ လှူဒါန်းတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီတဂူ ဆရာတော် ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တဉာဏိဿရရဲ့ ပုံတူကြေးရုပ်တုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ စတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ထိုင်တော်မှုပုံစံ သွန်းလောင်းထားတာပါ။ ပုံတု ကြေးရုပ်တုက အမြင့်ပေ ၅ […]
လေးတန်းကျောင်းသူလေးအား ပထွေးဖြစ်သူမှ မဖွယ်မရာပြုကျင့် ကြံစည်
လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် အသက် ၉ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေးအား ပထွေးဖြစ်သူမှ မဖွယ်မရာပြုကျင့်မှု ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်နေက ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မြောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ဒိုင်စုကျေးရွာတွင် ဖဖော်ဝါရီ ၂၁ရက်နေ့ နံနက်၇နာရီခန့်က နေအိမ်တွင် အိပ်ပျော်နေသည့် ၉နှစ်အရွယ် လေးတန်းကျောင်းသူ မဝါ(အမည်လွှဲ)အား တစ်အိမ်တည်းနေ ပထွေးဖြစ်သူ ဦးအောင်သူမှ ဘောင်းဘီနှင့် အကျီချွတ်ခိုင်းကာ ၎င်း၏မိန်းမကိုယ်အား လက်ဖြင့်မဖွယ်မရာ ပြုလုပ်၍ သားမယားပြုကျင့်ရန်ကြံစည်ခဲ့သဖြင့် မဝါ(အမည်လွှဲ)မှ ရုန်းကန်ထွက်ပြေး လွှတ်မြောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ […]